‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशत खर्च सामाजिक उत्तरदायित्वमा हुनैपर्ने’ – Insurance Khabar
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशत खर्च सामाजिक उत्तरदायित्वमा हुनैपर्ने’
प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७६, बिहीबार १७:३०
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्युनतम एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाज सुधार कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । बिहिवार राजधानीमा युवा परिषदले आयोजना गरेको युवा उद्यमी समिट २०१९ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले बैंकहरुले सहुुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिनुपर्ने समेत बताए । पाँच प्रतिशत भन्दा कम व्याजदरमा बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सर्वसाधारणहरुले बीऊ पुँजी र सुहुलियत ब्याजमा पैसा समेत पाउने व्यवस्था भएको छ यसले गर्दा व्यवसाय अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौ ।’ मन्त्री खतिवडाले अगाडि भने, ‘गत वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फण्ड आयो कार्यान्वयन भएन । यो वर्ष कार्यविधि बनेको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर अर्को महिनाबाट कार्यान्वयन हुने छ ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले युवापुस्तालाई कृषिमा रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटको पनि व्यवस्था गरेको समेत उनले जनाए । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले खर्च गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको खर्चलाई नियमन गर्ने जनाएको छ ।